I-Anti Mosquito yamadivayisi weselula we-iOS ne-Android | Izindaba zamagajethi
Anti Mosquito Free: xosha omiyane abacasulayo epikinikini yethu
Kwenzekile kwabaningi bethu ngesinye isikhathi empilweni, ukuthi saphuma njengomndeni saya osukwini olukhulu ezweni (noma nasolwandle) nasohambweni lwethu oluhle kakhulu, omiyane abacasulayo baqala ukuvela lokho kusenza sinyamalale cishe masinyane kulesi simo; Uma usebenzisa uhlelo lokusebenza, i-Anti Mosquito Free uzoba nethuba lokuxosha omiyane kude nendawo lapho ukhona ngaleso sikhathi.
I-Anti Mosquito Free isicelo esithandekayo ongasifaka (okwamanje) kudivayisi ephathekayo ye-Android, ephakamisa kokubili ithebhulethi njengefoni ephathekayo. Indlela yokusebenzisa leli thuluzi yinto ethakazelisa kakhulu ukwazi, inqobo nje uma wazi imvamisa elungile ongayisebenzisa ukuze ukwazi ukwenza omiyane, bayakuvumela uchithe usuku oluhle ensimini nomndeni noma nabangane.
1 Isebenza kanjani i-Anti Mosquito Free kudivayisi yeselula ye-Android
2 Uhlobo lwe-Anti Mosquito Free yamadivayisi eselula ane-iOS
Isebenza kanjani i-Anti Mosquito Free kudivayisi yeselula ye-Android
Okokuqala kufanele uye ku-Google Play Isitolo ukulanda, ukufaka nokusebenzisa i-Anti Mosquito Free; emva kwalokho, kuzodingeka ubheke kuphela isithonjana esikrinini sasekhaya sedivayisi yakho yeselula, ukuze ukwazi ukubabaza ngokushesha isikhombimsebenzisi leli thuluzi elinalo. Kuyo uzoba nethuba lokuthi khetha ukuthi ufuna ukusebenza kangaki.
Lesi yisikhathi lapho kufanele sisebenzise iqhinga elincane, okuyisincomo esivela kunjiniyela waso. Engxenyeni engenhla yesixhumi esibonakalayo uzothola izinkinobho ezintathu ezihlukile, okuyi ziphawulwa ngezikhathi ezahlukahlukene ongayisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi. Engxenyeni engezansi kunenkinobho yesilayida esincane kunalokho, ezokusiza ukuthi uchaze imvamisa ngesandla uma ungafuni ukusebenzisa izinkinobho ezingenhla.
Isincomo sikanjiniyela we-Anti Mosquito Free sithi oyisebenzisa ku-22 kHz, ngoba le mvamisa iyona ezosebenza kahle ukwethusa omiyane abasendaweni okuzungezile lapho ukhona. Kwividiyo yedemo ephakanyiswe unjiniyela ungababaza okungenzeka uma kusetshenziswa imvamisa ephansi; Njengesibonelo, imvamisa ecishe ibe yi-15 kHz ibekwe lapho, esingayilalela ngoba kungaphakathi kokuvama okungalandwa yindlebe yomuntu. Uma kunalokho sisebenzisa imvamisa ephakeme (njengoba besincomile ngokusho konjiniyela), umsindo okhishwa yizipikha awunakuzwakala ngendlebe yomuntu kodwa kuphela ngokuthola izimpondo zala mamiyane.
Okuhle kunakho konke ukuthi lolu hlelo lwe-Anti Mosquito Free luqhubeka lusebenza (ngemuva), okusho ukuthi izoqhubeka nokukhipha umsindo kumvamisa esiyikhethile ngenkathi sisebenza kunoma yiluphi olunye uhlelo lokusebenza lweselula esilifunayo.
Uhlobo lwe-Anti Mosquito Free yamadivayisi eselula ane-iOS
Uhlelo lokusebenza esikusikisela ngenhla lunikezelwe kuphela futhi kuphela ukusebenza kumadivayisi eselula e-Android; manje uma unayo nge-iOS (okungaba yi-iPhone noma i-iPad) Sinesixazululo esihle kuwe, sona leso esiza negama elaziwa njenge-Anti Mosquito Free kodwa esonjiniyela ohlukile.
Ungakwazi landa ngqo kusuka ku-Apple Store futhi esikrinini sayo, kufanele ukhethe inkinobho eyisiyingi lapho umiyane ukhona; lapha ungakwazi kuphela khetha phakathi kwamaza amathathu ahlelwe ezinkinobho zawo, kufanele ukhethe endala kunazo zonke ngokusho kwesincomo sonjiniyela wethuluzi esishilo ngenhla. Ku-interface ngeke uthole inkinobho eslayidayo njengesiphakamiso sangaphambilini, into ongeke udinge ukuyisebenzisa ngoba kuhlala kunconywa ukuzama ukusebenzisa izilungiselelo ezizenzakalelayo neziphakanyisiwe ngunjiniyela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Anti Mosquito Free: xosha omiyane abacasulayo epikinikini yethu
I-Overwatch, isinyathelo sokuqala esithembisayo ku-FPS
Ukubuyekezwa kwe-FBX: Isidlali samahhala se-3D ne-Object Player